Waa maxay paelodieta iyo sida loogu midho dhaliyo? | Ragga Stylish
Mid ka mid ah ereyada ugu isticmaalka badan ee nafaqada maanta waa cuntada Paleo. Laakiin maxay ka kooban tahay? Qof kastaa wuu ogyahay in cunnada habboon ay muhiim u tahay jir caafimaad qaba iyo nolol caafimaad leh. Dareenkan, lPaleodiet wuxuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha caafimaadka wanaagsan.
Xawaaraha nolosha maanta inta badan way adkeysaa in la helo waqti guriga lagu kariyo. Waa wax iska caadi ah dadku inay isticmaalaan alaabta jikada ee diyaarka ah, kuwaas oo dhadhan fiican leh, laakiin habka wax soo saarka aan la aqoon. Xaaladaha kale, u diyaargarowga degdegga ah sida sandwiches-ka ayaa ah xalka marka aad guriga timaado ka dib maalin daal shaqo ah.
Waqtiga fog, cawaaqibta ka imaaneysa Cuntada Paleo ayaa bilaaban doonta in la arko. Kuwa ugu caansan waa culeyska, dhiig karka, iyo dhibaatooyinka caloosha iyo dheefshiidka. Ka waxtar badan ka fikirka daaweynta, ka hortagga iyo cunno isku dheelitiran ayaa lagula talinayaa.
1 Cuntada Paleo waa ikhtiyaar caafimaad ahaan taariikhi ah
2 Maxaa ku dhacay cuntada aadanaha?
3 Waa maxay Cuntada Paleo?
4 Waa maxay iyo goorma
5 Cunnooyinka lagu taliyay iyo kuwa kale si looga fogaado
5.1 Cuntada Paleo waxay soo jeedineysaa in la cuno:
5.2 Ka fogow:
6 Maxaad u korsataa Cuntada Paleo?
7 Dhibaatooyinka qaar ee cuntada Paleo
8 Cuntada paleo ee loogu talagalay cayaaraha
Cuntada Paleo waa ikhtiyaar caafimaad ahaan taariikhi ah
In kasta oo ereyga "paleodiet" uu yahay mid dhawaanahan la adeegsanayay, haddana fikradu waa mid gabowday sida nin laftiisa. Waxay ku saleysan tahay mabda'a ah in bini'aadamku u soo ifbaxay kumanaan sano ugaarsi iyo wax soo urursi.
Uruurinta miraha, badarka iyo caleemaha, ugaarsashada xayawaanka ku nool deegaankooda, ayaa ka dhigtay meelaha ay cuntada ka helaan. Nidaamka dheef-shiidka bini-aadamka si dabiici ah ayuu ula qabsaday cuntadan.
Maxaa ku dhacay cuntada aadanaha?
Horumar iyo teknolojiyad, processing cunto cusub ayaa waliba timid. Cunitaanku wuxuu bilaabay in loo tixgeliyo raaxo oo kaliya looma baahna. Muxaafid, midabeeyeyaal iyo wixii intaa dheer oo dhan ayaa soo muuqday taas oo horseeday soo bixitaankii waxa loogu yeero "cuntooyinka aadka loo farsameeyay"
Si tartiib tartiib ah, dhadhan, midab iyo farshaxan ayaa lagu soo rogay diyaarinta cuntada. Dadku waxay bilaabeen inay la qabsadaan dhadhaminta iyo ku raaxeysiga waxa ay cunayaan, xitaa haddii aysan sidaa u fiicnayn. Isla mar ahaantaana, cudurro la xiriira nidaamka dheef-shiidka ayaa kacay.
Waa maxay Cuntada Paleo?
Cuntada Paleo ama "Paleo Diet", sida la ogsoon yahay, waa in loo cuno sidii ninkii Paleolithic sameeyay. Waa cunto ku dhisan hilibka, kalluunka, fiberka, miraha iyo khudradda.
Muuqaal caan ah ayaa ah in cuntada la cuno aan la soo saarin, dabiici ah. Tani macnaheedu maaha inay iyaga ku cunayaan ceyriin, waxay isticmaalaan habab fudud oo wax lagu karsado: iyaga dub, karkari, uumi iyaga. Cuntooyinka kale, sida daqiiqda, ukunta iyo caanaha waa laga reebi doonaa cuntada noocan ah.
Astaamo kale oo qeexaysa Cuntada Paleo ayaa ah in cabitaannada kaliya ee la oggol yahay ay yihiin biyo iyo casiir dabiici ah. Khamriga, khamriga, iyo guud ahaan dhammaan kuwa khamiirka leh iyo kuwa la nadiifiyey, ma dhexgalaan kooxda cuntooyinka la oggol yahay.
Waa maxay iyo goorma
Laba su'aalood oo muhiim ah marka la qaadanayo cuntada Paleo ayaa si sax ah u ah waxa la cunayo iyo goorta. Dabeecadda iyo badanaa noocyada xilliyeed waa alaabada caadiga ah iyo xilliyada la cuno. Waa, marka la soo koobo, jikada alaabta.
Waxaas oo dhami waxay muujinayaan in khudrad kasta iyo midho kasta la cabi doono xilliga si dabiici ah loo soo saaray.. Dalagyada ama xannaanada xoolaha ee xaaladaha sida gaarka ah loo xakameeyo looma oggola cuntadan.
Cunnooyinka hiddo ahaan loo farsameeyay, GMOs, xayawaanka lagu duray hormoonnada, bacriminta kiimikada ee dhulka - waxaas oo dhan waxaa loo arkaa caafimaad darro. Guud ahaan, badeecooyinka leh asalkaan, ayaan laga aqbalin taageerayaasha cuntadan.
Cunnooyinka lagu taliyay iyo kuwa kale si looga fogaado
Cunnooyinka lagu dhex dari karo cuntada Paleo way badan yihiin wayna kala duwan yihiin, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo kale oo ay tahay inaan iska ilaalino. Marka xigta waxaan kala saari doonnaa:
Cuntada Paleo waxay soo jeedineysaa in la cuno:
Miraha iyo khudaarta.
Hilibka laga helo xoolaha cunay cunto dabiici ah.
Cuntada badda iyo kalluunka.
Miraha dabiiciga ah ee la qalajiyey.
Dufan caafimaad leh.
Dhir udgoon iyo udgoon.
Maxaad u korsataa Cuntada Paleo?
Shaki kuma jiro in cuntada sida paleo waxay bixisaa dhammaan nafaqooyinka jidhku u baahan yahay. Isla mar ahaantaana, waxay ka saartaa walxaha waxyeelada leh.
Waxay haysaa heer tamar oo isu dheellitiran maalintii oo dhan, iyada oo aan la isticmaalin qashin-qubkaas aad u saameeya.
Sidoo kale, heerka sonkorta dhiigga ayaa xasilloon. Tani waxay u oggolaaneysaa sonkorta inay gaaraan muruqyada si fududna loo gubo. Sidaa darteed, adigu ma urursatid baruur mana helaysid dufan.
Caabuq iyo dareen xanaaqa caloosha iyo xiidmaha ayaa baaba'a. Transit-ka xiidmaha ayaa caadi ah.
Nidaamyada difaaca iyo dheef-shiidka ayaa si sax ah u shaqeeya. Iyada oo la iska ilaaliyo xasaasiyadaha 'paleodiet' iyo cudurada iswada.
Heerarka ku filan ee serotonin iyo melatonin, neurotransmitters-ka ku shaqeeya hurdada, ayaa la gaaraa. Sidaa darteed, nasashada habeenku runtii waa nasasho iyo raaxo.
Malaha "gluten", sidaas darteed waxay ku habboon tahay baruurta iyo dulqaad la'aanta walaxdan.
Waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta kolestaroolka wanaagsan iyo yaraynta xumaanta.
Waa cunto hodan ku ah amino acids, sidaa darteed waxay ka caawisaa soo kabashada tababarka kadib. Waxaa had iyo jeer qaata ciyaartooyda.
Marka la soo koobo, Cuntada Paleo waxay kaa caawineysaa inaad caafimaad qabtid, caato tahay, xoog leedahay, oo muhiim tahay.
Dhibaatooyinka qaar ee cuntada Paleo
Way yara adkaan kartaa qaab nololeedka maanta in la ilaaliyo cunto isku dheellitiran. Tanina waa muhiim, maxaa yeelay Paleodiet-ka waa inaad ku wada cuntaa dhammaan badeecooyinka liiska ku jira.
Waqti yari waxay ka dhigan tahay in hilibka mararka qaarkood lagu xadgudbo, tusaale ahaan. Si fudud loo diyaar garoobo, oo leh tabar tamar weyn, hilibka ayaa caafimaad leh marka lagu daro nafaqooyinka kale.
Cunista sidan oo kale waxay u egtahay inay xoogaa qaali tahay. Dhammaan waxay kuxirantahay barta isbarbardhiga. Xaaladaha qaarkood, xulashada cuntada cusub waxay u baahan kartaa miisaaniyad ka badan tan wax soo saarka dukaamada waaweyn. Laakiin kama qaalisan tahay saxan kasta oo laga helo makhaayad wanaagsan.
Waqti ayey qaadataa in la qorsheeyo cuntadaada. Waxaa lagugula talinayaa inaad qorsheyso cunno toddobaadle ah iyadoo loo eegayo dhadhanka iyo laxanka qof walba. Sidan oo kale, uma baahnid inaad ka fikirtid waxa aad cuni lahayd maalin kasta. Waxaa jira xarumo si gaar ah loogu tala galay cuntooyinka shaqsi ahaaneed ee sameeya cuntooyinkan.
Cuntada paleo ee loogu talagalay cayaaraha
Cilmi-baaris ayaa muujisay in ciyaartooyda qaata cuntada paleo ay ku raaxaystaan ​​fayoobaanta dheef-shiid kiimikaadka ka weyn. Si kastaba ha noqotee, marka laga hadlayo jimicsiga xoogga badan, hoos u dhaca kaarbohaydraytyada waxay u horseedi kartaa waxqabad liita. Talada ayaa ah in lagu hagaajiyo cunnada kalooriga baahida qof kasta.
Had iyo jeer waa suurtagal in la sameeyo la qabsiyo ka jawaabaya baahiyaha noole kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Paleodiet